Xildhibaan Dalxa oo is hor-istaag lagu sameeeyey - Awdinle Online
Xildhibaan Dalxa oo is hor-istaag lagu sameeeyey
March 8, 2020 (Awdinle Online) –Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa sheegay in Maanta xilli ay howlo Shaqo ugu socdeen dhinaca Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho ishor-istaag lagu sameeyey.
Xildhibaanka waxaa uu ku sheegay in Bar-koontorool oo ku taalla halka laga galo Garoonka kuna dhow Isgoyska km4 loo diidey inay ilaaladooda kala gudbaan loona sheegay inay ilaalada halkaasi ku reebaan.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in go’aanka Ciidamada u cuntami weysay,isla markaana ay go’aansadeen inay dib ugu soo laabtaan guryahooda kana joogaan Shaqadii iyo shir ay ka qeyb-geli lahaayeen.
Dhinaca kale Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxa uu sheegay in horey ay dhibaatooyin kala duwan ugu qabeen in mararka qaar Ciidamada ilaalada u ah looga yeero Xerooyinka iyo guutooyinka ay ka tirsan yihiin taasina ay sabab u noqoto inay ilaalo la’aan noqdaan.
Hoos Ka Dhageyso Wareysiga Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Previous articleSheekh Shaakir ‘‘Ciidamadii loogu tala galay la-dagaalanka Al-Shabaab waxaa loo adeegsaday Hoggaanka Ahlusunna”
Next articleSawiro: Madaxweyne Farmaajo oo maanta qaabiley Wafdi sare oo Kenyan ah